Avalanches enhau kubva kumaguta ese epasi kubva kune vashandisi | Nhau Yemagariro Evanhu - Avalanches.com
Wakatonyoreswa? Nyorera mu
Kana kusaina na
Nokusayina, unobvumirana ne: Zviga zvebvumirano uye Yakavanzika mutemo, kusanganisira kushandiswa kweKuki.
AVALANCHES Nyorera mu
Wakanganwa password yako?
Usave neaccount? Nyorera
4 kodhi kodhi yakatumirwa
Isa kodhi kuti uenderere mberi
Tsamba yacho inogona kupinda mune spam
mushure 60 sec
Iyi nhamba yakatove yakashandiswa
Dzosera yako yakare account
AVALANCHES Dzosera password yako
Taura nesu Ndatenda nechikumbiro chako
Tichagadzirisa chikumbiro chako uye tinobatana newe munguva pfupi
Inoshanda sei? Platform Features Mikana Chikuva ichi ndechaani?
Avalanches ipuratifomu yenhau itsva
kwaunogona kuwana zvigadziriso zvezvino kubva kune zviri pamutemo midhiya, gadzira nhau dzemuno uye wedzera huwandu hwevako vanonyoresa.
Avalanches ipuratifomu yakasarudzika inobvumira mushandisi wese kuwana nhau dzichangoburwa kubva kudhorobha diki rekumaruwa kusvika pasirese.
Mushure mekunyoresa, unogona kugadzira zvinyorwa uye kutsanangura zviitiko zvese zviri kuitika muguta rako uye wozviratidzira mune yepasirese feed yevashandisi kutenderera pasirese.
Hapasisina kudiwa kwekushandisa nhamba yakakura yenhau portals, yedu aggregator inobvumidza iwe kuti uone zvese zvinoburitswa imwe neimwe sosi munzvimbo imwechete.
Hazvina kumbova nyore kusefa nekutsvaga nhau. Avalanches inobvumira munyori wega wega kuti aendese ruzivo kune vavanovavarira vateereri, agamuchire mhinduro kubva kunharaunda inoshanda uye varatidze zvavanotumira munyika.
Iwe unogadzira chinyorwa chenhau munharaunda yeguta rako.
Kugamuchira chiitiko kubva kune vashandisi, kuyerwa kwechinyorwa chako kunokura.
Kudhindwa kwacho kunokwidza mwero, kupinda mukudya kwepamusoro kwenyika.
Mushure mekuyemurwa zvakanyanya nevaverengi vari munyika yako, chinyorwa chako chinogona kuve musoro wenhau wepasi rose, uchipinda muchikamu chepasi rose chevashandisi veAvalanches.
Zvakanaka (Classifieds Board)
Gadzira zvinyorwa uye tengesa zvigadzirwa, ipa masevhisi kana tenga uye tsvaga nyanzvi dzaunoda. Mapato mazhinji anoita kuti kutsvaga kwako kuve nyore uye kukubatsira kuti uwane chaizvo zvauri kutsvaga!
Avalanches inoratidza iyo chaiyo mamiriro ekunze eguta rako rekugara. Mamiriro ekunze anogara aripo uye achionekwa kwauri iwe paunongopinda mupuratifomu yedu.
Zvishandiso zvedu zvinopa vashandisi kugona kugadzira mapoka nenharaunda. Kugovana ruzivo uye kukurukura zviitiko zvichangoburwa nevanhu vane pfungwa dzakafanana kwave nyore kupfuura nakare kose.
Chinja pakati peakasiyana enhau mafeed: rimwe reguta rako, nyika, pasirese uye chikafu chako pachako. Nhau dzinorongwa zvichienderana nenzvimbo yako. Uye zvakare, mushandisi wega wega anogona kugadzira sefa yemunhu nekusarudza maguta, midhiya nemapoka, kunyorera kune yavo yekuvandudza, izvo zvisingangokubvumire kuti usatambise nguva yako pachako uchitsvaga inodiwa misoro yenhau, asi zvakare kuti uone nekukurumidza nhau dzese vanofarira mune yako feed feed.
Kugadzira uye kugovera zvemukati
Goverana ruzivo, gadzira vateereri, kurukura nyaya dzakakosha kwauri, uye govana multimedia nenharaunda yevanhu VAKO. Zvese izvi zvine nyore, intuitive text edhita iyo inogara iri pamazano eminwe yako.
Verenga ruzivo rwakakodzera chete
Bhurawuza uye unyore kune yepamutemo midhiya uye uverenge chete yakavimbika nhau kubva kune ane mukurumbira masosi mune yako feed mazuva ese. Nakidzwa neako ese aunofarira masosi munzvimbo imwechete uye tsvaga nhau kubva kutenderera pasirese, mumitauro yese uye zvachose mahara.
Join nharaunda itsva uye gadzira dzako
Basa redu reboka rinokutendera iwe kuti ugadzire sangano, bhizinesi, kana thematic nharaunda peji mune chero nzvimbo kuti uwane organic kusvika kune chako chinangwa chevateereri. Tsvaga vanhu vane pfungwa dzakafanana uye kurukurai zvakakukoshera papuratifomu nyowani, yakanakira uye yakanaka.
Chikuva ichi ndechaani?
Avalanches chinhu chakasarudzika chevanyori chinokutendera kuti uve pedyo nevateereri vako sezvinobvira. Izvi zvinowanikwa nesefa nenzvimbo - mushandisi wega wega akanyoreswa anogona kugadzira zvinyorwa nezve zviitiko zvinoitika mudunhu rake uye kuwana mhinduro kubva kune vamwe vanofarira vashandisi. Nekuda kwechinhu ichi, munyori wega wega anogona kuunganidza vateereri vanofarira uye nekukurumidza kuwedzera, kuparadzira ruzivo nezve akakodzera nhau uye zviitiko.
Avalanches ipuratifomu iyo munhu wese anogona kuziva nezvese zviitiko zvepasirese. Chimbofungidzira: nhau dzese, kubva munharaunda kuenda kune imwe nyika, pane imwe nhau portal. Iyo media aggregator inokutendera iwe kuti uzive nezve zvichangobva kuitika kubva kune zviri pamutemo masosi, uye yemuno nhau feed inokutendera iwe kuti uverenge nezve zviitiko zvakasiyana wega.
Avalanches chinhu chitsva, chakasarudzika sosi yekugadzira uye kuverenga nhau, kushandira mushandisi sechinhu chitsva chekuchinjana ruzivo. Iva pakati pezviitiko zvese: tora nhau kubva kune vakazviona, gara uchiziva nezve zvese zviri kuitika zvakakukomberedza uye nyorera vateereri vako!
Gadzira nzvimbo itsva yeruzivo neAvalanches izvozvi.
Sign Up izvozvi
Sitemap Sitemap Weather Sitemap Users Sitemap Cities Zvakanaka (Classifieds Board) Mamiriro ekunze emaguta ese ePasirose
Avalanches © 2021 . All Right Reserved Terms Yakavanzika mutemo Cookies zvakavanzika Taura nesu